Ukubulala iintsholongwane kunye nokuCoca inzalo | I-China Ukubulala iintsholongwane kunye nokucoca abavelisi kunye nabaxhasi
YQG Series Pharmaceutical yomsuki weengubo
I-washer ye-GMP iphuhliswa yi-SHINVA ngokwe-GMP yamva nje kwaye inokuhlamba kwangaphambili, ukuhlamba, ukuhlamba kunye nemveliso eyomileyo. Inkqubo yokuhlamba iyaphinda kwaye iyarekhodwa, yiyo loo nto ikwazi ukusombulula ngokupheleleyo umgangatho ongazinzanga wenkqubo yokuhlamba ngesandla. Olu chungechunge lwama-washer ahlangabezana neemfuno ze-FDA kunye ne-EU.
I-GD Series Sterilizer yoBushushu obuMileyo
Isitayile sokushisa esomileyo sisetyenziselwa inzalo yezinto ezinobushushu obuphezulu. Isebenzisa ukujikeleza komoya oshushu njengemithombo yeendaba esebenzayo yenzalo kunye ne-depyrogenation kwaye idibana ne-GMP yase-China, i-EU GMP kunye neemfuno ze-FDA. Beka amanqaku kwigumbi, qala umjikelo wenzalo, emva koko ujikeleze ifeni, imibhobho yokufudumeza kunye nezivalo zomoya ziya kusebenza kunye ukufudumeza ngokukhawuleza. Ngoncedo lokujikeleza kwe fan, umoya oshushu owomileyo ungene kwigumbi ngendlela ye-HEPA enobushushu obuphezulu kunye nefom yomoya efanayo. Ukufuma komphezulu wamanqaku kususwa ngumoya oshushu omileyo emva koko kukhutshelwe ngaphandle kwegumbi. Xa iqondo lobushushu kwigumbi lifikelela kwixabiso elithile, ivelufa yokukhupha ivaliwe. Umoya oshushu owomileyo ujikeleza kwigumbi. Ngokungenisa umoya okwethutyana, kwigumbi kukho uxinzelelo oluqinisekileyo. Emva kokuba isigaba sokucoca siphelile, umoya ococekileyo okanye ukupholisa ukungena kwamanzi kuvulekile ukupholisa. Xa amaqondo obushushu esihla kwixabiso elibekiweyo, izivalo ezizenzekelayo ziyavalwa, kunye nealam evakalayo nebonwayo inikwa ukubonisa umnyango wokuvula.